भिडियो « Onlinetvnepal.com
यसरि भयो गोमा एयर दुर्घटना: चालकको मृत्यु, दुई घाइतेलाई काठमाडौं ल्याउन सकिएन…(हेर्नुस् भिडियो)
सोलखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा गोमा एयरको विमान दुर्घटनामा परेको छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका विमानका चालक पारस राईको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने चालक दलका दुई सदस्य पनि घाइते छन् । काठमाडौंबाट उठेको गोमा एयरको कार्गो विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो । विमान धावनमार्गबाट केही तल खसेको र
आयुष्मानलाई देखेर रोए युवती फ्यानहरु….(भिडियो सहित)
चलचित्र “चपली हाइट २”बाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कलाकार हुन्, आयुष्मान देशराज जोशी। चलचित्र क्षेत्र अहिले उनको चर्चा एकदमै छ । पारिवारिक व्याकग्राउण्ड अनि सामाजिक सञ्जालको फ्यान फलोईङले पनि फिल्म रिलिज पहिले समेत चर्चामा रहेका उनको कामलाई युवा दर्शकले केहि हदसम्म मन पनि पराए । उनै आयुष्मानलाई देखेर रोए युवती फ्यानहरु..हेर्नुस् भिडियो…
यसरि सलमान खानले बाहुबली-२ को मजाक उडाए (भिडियो)
बलिउडका चर्चित नायिक सलमान खानले बाहुबली-२ को मजाक उडाए पछि हेर्नुस् के भयो थप जानकारीको लागि हेर्नुस् भिडियो सहित :-
भूकम्पमा धरहराबाट सँगै खसेका जोडी मार्मिक कथा…(हेर्नुस् भिडियो)
वैशाख १२ गते दिउँसो ११ः५६ मा धरहराको बार्दलीमा सञ्जीव र रमिलाका पाइला पर्नेबित्तिकै भूमरी परेर हावा ‘स्याइँय’ गर्दै आएको थियो। त्यो हावाले कपाल र अनुहारमा छोएर जाँदा लागेको काउकुतीको अधुरो महसुस अहिले पनि उनीहरूलाई हुन्छ। धरहरामुनिको पृथ्वी मडारिएर आएको पो रहेछ, चटट्ट आवाज निकाल्दै धरहरा ढल्किएको थियो। कहिलेकाहीँ सपनामा सञ्जीव
एमाले अग्रस्थानमा आएको छ तर यो काफी छैन : केपी ओली (भिडियो)
एमाले अग्रस्थानमा आएको छ तर यो काफी छैन : केपी ओली थप जानकारीको लागि हेर्नुस् भिडियो :-
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, धेरै पूराना थोरै नयाँ ? के के छ त अरु ? (भिडियो हेर्नुहोस)
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, धेरै पूराना थोरै नयाँ ? के के छ त अरु ? थप जानकारीको लागि हेर्नुस भिडियो :-
विरगन्जमा सौगात संग भेटिइन बर्षा राउत…(भिडियो सहित)
प्रियंका कार्की र सौगात मल्ल मुख्य भूमिकामा रहेको चलचित्र ‘फाटेको जुत्ता’ मा बर्षा राउत पनि जोडिएकी छिन्। केहि दिन अगाडी शुभमुहर्त गरिएको चलचित्रमा प्रियंका र सौगातको साथमा चलचित्रमा वुद्धि तामाङ, कामेश्वर चौरासिया लिड रोलमा रहेको बताईएको थियो। तर चलचित्रमा यतिबेला बर्षा राउत थपिएकी छिन्। निर्देशक निकेश खड्काले सामाजिक संजाल फेसबुकमा
दिपाश्रीकी बहिनी आईन् मिडियामा – गायिका बनेपछी के भन्छिन रानु निरौला – (भिडियो सहित)
दीपाश्री निरौला चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ नाम होइन् । चलचित्रक्षेत्र कसैको चर्चा हुन्छ भने त्यसको नाम दीपाश्री निरौला हो । दीपाश्री कलाकारितामा आएको २५ वर्ष भन्दा धेरै भइसकेको छ । दीपाश्रीको त्यही पथलाई पछ्याउँदै उनकी बहिनी रानु निरौलाले पनि कलाकारितामा प्रवेश गरेकी छिन् । रानु अहिले गायिकाको रुपमा कलाकारितामा प्रवेश गरेकी
शरिरमा रहेका कोठीले जीवनमा कस्तो संकेत गर्छ त ?
एजेन्सी-कुनै गोरो बर्णकी महिलाको अनुहारमा कालो कोठी छ भने त्यसले सुन्दरतामा निखार ल्याइदिन्छ । कालो कोठी अनुहारमा भएमा कसैको नजर नलाग्ने विश्वास समेत रहिआएको छ । शरीरमा यस्ता कोठी हुनुका विभिन्न कारण हुन्छन् । तर कोठीको अर्थ भने आ-आफ्नै तरिकाले लगाउने गरिन्छ । यहाँ हामीले समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार
हार निश्चित भएपछि रञ्जुको यस्तो उद्घोष (हेर्नुस भिडियो )
हार्ने निस्चित भए सङ्गै रन्जु दर्शनाले आफु मेयर नभए पनि महानगरबासीको पहरेदार बनेर काठ्मन्डौ बासीको सेवा गर्ने उद्द्घोस गरिन – थप जानकारीको लागि भिडियो हेर्नुस :-